Gbasara anyị - Zhuji Shengpai Packaging Material Co., Ltd.
Zhuji ShengPai Packaging Materials Co., Ltd. e guzobere na 2010, Isi obodo anyị edebanyere aha bụ $ 2, 000, 000; setịpụrụ "mmepe, imewe, mmepụta na ahịa" dị ka otu n'ime ndị na-ekpo ọkụ zọ foil mmepụta Enterprises.The ụlọ ọrụ na-ekpuchi ebe nke 15 acres nke 28, 000 square mita na 13 oge a kpọmkwem precis oge a na nkenke ebi akwụkwọ mmepụta ngwá 10 tent, dịgasị iche iche, ọtụtụ eji na PS ụfụfụ plastic etiti iga, mkpụrụ Transportation, ịkwanyere nkuku support nyefe na ndị ọzọ na ubi. Anyị anọwo na-etolite ihe nkiri eserese dị elu bara uru maka ndị ahịa na echiche nke ihe ọhụrụ na mmepe, ndị ahịa na-anabatakwa nke ọma na ụlọ na mba ofesi. Obi ụtọ na-anabata ndị ahịa si n'ọnọdụ dị iche iche nke ndụ iji gaa na ụlọ ọrụ anyị ma rụọ ọrụ ọnụ iji mepụta ọmarịcha ọdịnihu.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịnwa ịkpọtụrụ anyị, enwere ike anyị ga-erite uru ọnụ wee kerịta ibe anyị akụ.
Modern nnukwu-ọnụ ọgụgụ osisi ọkaibe akụrụngwa magburu onwe oru otu na-eme ka n'ichepụta larịị nke enterprise mgbe niile na-anọ na-ebute ụzọ nke ụlọ ọrụ, ike n'ichepụta ikike iji hụ na enterprise n'oge zara na izute dị iche iche mgbasa mkpa; Scientific management ụzọ na ọgaranya n'ichepụta ahụmahụ n'ihu ime ka anyị na-eduga ọnọdụ na isi n'ichepụta ubi!
Anyị tumadi rụpụta SPC / WPC / LVT n'ala foil, ịkwanyere mgbidi ọkụ zọ foil, UV foil, MDF foil, na anyị na-elekwasị anya na PS ụfụfụ plastic etiti iga, mkpụrụ Transportation, ịkwanyere nkuku support nyefe. Anyị nwere usoro mmepụta ihe na ndị ọkachamara na-eto eto na anyị na-emepe emepe ihe nkiri ndị na-ebi akwụkwọ dị elu bara uru maka ndị ahịa na echiche nke mmepe na mmepe, Anyị nwere ike izute ọchịchọ gị dịka ịchọrọ. Obi ụtọ na-anabata ndị ahịa si n'ọnọdụ dị iche iche nke ndụ.